अर्थमन्त्रीज्यू, खर्च घटाउने कि करको धम्की दिने ?
२०७७ बैशाख, २६
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘कोरोनाको समस्या सरकारले सृजना गरेको समस्या होइन, त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै बेहोर्न सक्दैन’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको कुराले सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार रहेछ भन्ने देखाएका छ । हो, सरकारको आफ्नै स्रोत हुँदैन, उसले स्रोतको जोहो गरेर परिचालन गर्छ, वितरण गर्छ । सरकारको स्रोत संकलनको मुख्य स्रोत भनेको राजस्व हो । तर, त्यसको वितरण न्यायिक हुनुपर्छ । सरकारले न्यायिक रूपमा स्रोत परिचालन गरेको छ त ?
मुलुक कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ, जनता भौकै छन्, तर सरकारी कार्यालयका हाकीमका लागि करोडौं रुपैयाँको गाडी चाहिएको छ । अनावश्यक आयोग बनाएर पार्टीका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन पर्याप्त बजेट छ । सांसद विकास कोषका नाममा अनुत्पादक खर्च गर्न पनि बजेट छ । अझ, विश्वकै गरीब मुलुकभित्र पर्ने मुलुकको जनप्रतिनिधि, मन्त्रीहरूका लागि धनी र विकसित राज्यको सरह सुविधा छ । अनावश्यक सरकारी कार्यालय खडा गरिएका छन् । तिनले खासै काम गरेको पनि पाइँदैन । सरकार आफैले बनाएको समितिले खारेज गर्न भनेका मन्त्रालय, विभागहरू खारेज गर्न सरकारलाई चासो छैन ।
सरकारले कति बढी कर कसेको छ भन्ने त पेट्रोल र डिजेलमा लगाएको करबाट थाहा हुन्छ । एक लिटर तेलमा भ्याट, वातावरण प्रदूषण कर, पूर्वाधार विकास कर, त्रिशूली जलविद्युत्का निर्माणका लागि कर आदि लिइएको छ । अझ अहिले विश्वभरि यसको भाउ घटे पनि कोरोनाका लागि भन्दै भाउ घटाइएको छैन । जनतालाई कति करमा कति कसिँदो रहेछ, यो एउटा उदाहरणमात्रै हो ।
यसरी अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्न जनताले कति कर तिर्ने ? अहिले नेपाल विश्वकै बढी कर लिने राज्यमा पर्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको हिसाब गर्ने हो भने करको मारमा जनता परिरहेका छन् । त्यही कारण वस्तु र सेवा महँगो बनेको छ । करको बोझ कम गर्दा अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ र कर पनि बढ्छ । करमाथि कर थप्दै जाँदा लगानीकर्ता भट्किन्छन् । अहिले त्यही भएर स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्न नसकेको हुन सक्छ । अर्थमन्त्रीज्यू, करको भार जनतालाई नथप्नुस्, जनता जागे भने अर्को महासंकट आउन सक्छ ।
कलंकी, काठमाडौं ।
लथालिंग पोखरा विश्वविद्यलाय[२०७७ भदौ, १९]
अर्थमन्त्री र शेयरबजार[२०७७ भदौ, १९]
निषेधाज्ञाको मारमा जनता[२०७७ भदौ, १९]
नेताबाट विकासभन्दा विकासका कुरै बढी[२०७७ भदौ, १२]
कोरोनो नियन्त्रणमा समन्वय अभाव[२०७७ भदौ, १२]
[May 9, 2020 12:46am]
अत्यंत खरचिलो संघियता र प्रदेश सरकार को खसै काम छैन , यस लाई खारिज गरेर निक्केई राजस्व चुहावत रोकने काम गर्नु पर्यो सरकार के
[May 8, 2020 08:52am]
ab pni hami janta chup lagyo vne ultai hami lai nai sukaram banaunai ber lagaudain hola ab ko3barsha ma vot magnai tw aaunai hola tw kun mukh liyer aaunx hola herimala hami pni ..
हिमालयन डिष्टिलरीका पूर्व सञ्चालकलाई धितोपत्र बोर्डद्वारा कारवाही गर्ने निर्णय
विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीन करोड १८ लाख नाघ्यो (अपडेट)
तस्वीर : सुनसान काठमाडौं फन पार्क
आरएसडीसी लघुवित्तको संस्थापक शेयर विक्रीमा *
कोरोना संक्रमणबाट ४३६ जनाको मृत्यु पुष्टि, संक्रमितको संख्या ६७ हजार ८०४ पुग्यो